ငြိမ်းငြိမ်း – ဧရာဝတီ https://burma.irrawaddy.com Covering Burma and Southeast Asia Fri, 22 Jan 2021 16:14:14 +0000 en-US hourly	1	https://wordpress.org/?v=5.7.2 https://burma.irrawaddy.com/wp-content/uploads/2021/05/cropped-irr_fav-32x32.png ငြိမ်းငြိမ်း – ဧရာဝတီ https://burma.irrawaddy.com 32 32 NLD နဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီများကြားက ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး ဆက်ဆံရေး https://burma.irrawaddy.com/article/2021/01/23/236920.html Sat, 23 Jan 2021 01:30:28 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=236920
အပေးအယူ အလျှော့အတင်း မရှိခြင်းအတွက် NLD နှင့် တိုင်းရင်းသာပါတီ နှစ်ခုစလုံး ဝေဖန်ပြစ်တင်ခံကြရသည်။
The post NLD နဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီများကြားက ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး ဆက်ဆံရေး appeared first on ဧရာဝတီ.
လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်အတွင်း မြန်မာအစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများအကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ရွှေ့ဆိုင်းရတိုင်း ထိုညှိနှိုင်းမှုအတွက် ကြန့်ကြာစေသောအချက်တခုတွင် နေရာရွေးချယ်မှု သို့မဟုတ် အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်နေရာအတွက် အငြင်းပွားမှုသည် အတားအဆီးတခု ဖြစ်လေ့ရှိသည်။
လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကြောင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းသူများက ကြားခံ တတိယ နေရာတွင် ဆွေးနွေးရန် ပို လိုလားကြသည်။ ဥပမာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်က အစိုးရနှင့် မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်အဖွဲ့အကြား ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများသည် နေရာရွေးချယ်မှုအပေါ် အငြင်းပွားပြီး နှောင့်နှေးခဲ့ရဖူးသည်။
ထိုအငြင်းပွားမှုသည် အရှိန်ရနေဆဲ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများအပေါ် ထိခိုက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို သာမက ဆယ်စုနှစ် ၇ ခုကြာ ပြည်တွင်းစစ် အဆုံးသတ်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးအဖြေရှာနေရန် ကြိုးစားနေသည့် တိုင်းပြည်၏ နောက်ဆက်တွဲ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများပါ တုံ့ဆိုင်းစေခဲ့သည်။
ဆွေးနွေးပွဲနေရာရွေးချယ်ခြင်းသည် ယနေ့တိုင် အတားအဆီး ဖြစ်နေသေးသည်။ သို့သော် ယခုတကြိမ် အငြင်းပွားမှုမှာ နိုင်ငံရေးပါတီများအကြား အတိအကျဆိုရပါက အာဏာရ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီ နှင့် တိုင်းရင်းသား အုပ်စုအမျိုးမျိုးကို ကိုယ်စားပြုသော နိုင်ငံရေးပါတီများအကြားတွင် ဖြစ်သည်။
NLD သည် တိုင်းရင်းပါတီများနှင့် ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပရန် ပါတီထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များမှ သုံးဦးဖြစ်သည့် မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ အောင်မိုးညို၊ ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ပါတီ၏ တိုင်းရင်းသားရေးရာ ကော်မတီဝင် ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် တိုင်းရင်းသားရေးရာ ကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးအင်ထုံးခါးနော်ဆမ် တို့ပါဝင်သော အဖွဲတဖွဲ့ကို ဒီဇင်ဘာလက ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာလ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အပြတ်အသတ်အနိုင်ရပြီးနောက် ရက်အနည်းငယ်အကြာ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်တွင် တိုင်းရင်းသားအရေးနှင့် ပြည်တွင်းစစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးကို ပိုမို ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် အာဏာရပါတီနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပါရန် တိုင်းရင်းသားပါတီ ၄၈ ခုသို့ NLD က အဆိုပြု ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်မှု ရရှိရေးသည် NLD ၏ ဒုတိယသက်တမ်းအတွင်း အရေးပါသော ရည်မှန်းချက်များ ဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့အထိ တိုင်းရင်းသားပါတီ ၂၂ ခုက ထိုကမ်းလှမ်းမှုကို တုံ့ပြန်ထားသည်။
၎င်းတို့၏ တခုတည်းသောတာဝန်မှာ တိုင်းရင်းသားပါတီများ၏ အမြင်သဘောထားကို နားထောင်ရန်နှင့် ဆွေးနွေးချက်များကို NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ (CEC) သို့ တင်ပြရန်သာဖြစ်ပြီး ထို CEC ကော်မတီကသာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်မည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပါတီများ၏ အသံများ နားထောင်ခြင်းသည်ပင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရတရပ်ဖွဲ့စည်းရေးတွင် အရေးပါသော ခြေလှမ်းတခုဖြစ်သည်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟူသော အယူအဆကို လက်ရှိအစိုးရ၏ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီက စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက် တောင်ကြီးရှိ NLD ရုံးတွင် မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညို၏ NLD အဖွဲ့နှင့် ဦးစိုင်းလိတ် ဦးဆောင်သော SNLD အဖွဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်/ National League for Democracy-Shan / Facebook
NLD ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ပြည်ထောင်စုသစ် တည်ဆောက်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် တိုင်းရင်းသားပါတီများ၏ အမြင်များကို စုဆောင်းပြီး လာမည့်အစိုးရနှင့် လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းမှုတွင် ၎င်းတို့ထံမှ အကြံပြုချက်များကို နားထောင်မည်ဟု NLD ပါတီ ပြောခွင့်ရ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်က ဧရာဝတီ သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားထားသည်။
ဒေါက်တာမျိုးညွန့်က ရေရှည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့် ပြည်ထောင်စုသစ်တည်ဆောက်ရေးတွင် တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများ၏အမြင်ကို ထင်ဟပ်သင့်သောကြောင့် ၎င်းတို့၏ သဘောထားရယူခြင်းသည် တွေ့ဆုံရခြင်း၏ အရေးကြီးဆုံးအချက် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဒီမိုကရေစီမူများနှင့် ဖက်ဒရယ်အခြေခံ မူများကို အခြေခံသော အနာဂတ်ပြည်ထောင်စု ထူထောင်ခြင်းသည် NLD အစိုးရ၏ နိုင်ငံရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ၏ ဗဟိုချက်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ဒေါက်တာမျိုးညွန့်က ပါတီများနှင့်တွေ့ဆုံရသည့် အချက်တွင် “တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီတချို့က မကြာခင် ဖွဲ့စည်းတော့မယ့် လွှတ်တော်နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့မှာ သူတို့ ပါဝင်ချင်တဲ့ ဆန္ဒလည်း ရှိကောင်း ရှိမှာပေါ့။ အဲ့လို ရှိတယ်ဆိုလည်း သူတို့ရဲ့ တင်ပြချက်ကို ကျနော်တို့က လက်ခံရယူပြီးတော့ လွှတ်တော်နဲ့ အစိုးရဖွဲ့တဲ့အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာ တခုအဖြစ် ကျနော်တို့ ရယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောဆိုထားသည်။
၂၀၁၅ မှ သင်ခန်းစာများယူခြင်း
၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် အပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့သော NLD သည် ထိုနှစ်က ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံရေးကမ်းလှမ်းမှုများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း မရှိပေ။ ထိုသို့မလုပ်သောကြောင့် NLD နှင့် တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများအကြား အကွဲအပြဲ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ထိုသင်ခန်းစာအရ ယခုအကြိမ်တွင် NLD သည် ဧပြီလ အစိုးရသစ် မစတင်မီ တိုင်းရင်းသားပါတီများ ပါဝင်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်နေသည်။
NLD ၏ အမြင်အရ ဖိတ်ကြားခံဧည့်သည်ဖြစ်သော ဒေသခံပါတီများကို NLD က အိမ်ရှင်အဖြစ် ပါတီရုံးခန်းကို လာရောက်ရန် ဖိတ်ကြားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဒေါက်တာမျိုးညွန့်က ရှင်းပြသည်။
တွေ့ဆုံပြောဆိုမှုလုပ်ရန် စိတ်ထက်သန်မှုရှိသော်လည်း NLD က ထိုတွေ့ဆုံမှုများကို ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်အခြေစိုက် ပါတီရုံးခွဲများတွင်သာ ပြုလုပ်ရန် တင်းခံနေဆဲ ဖြစ်သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဒေသခံပါတီများနှင့် တွေ့ဆုံရန် ကချင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်များသို့ ယခုလအစောပိုင်းကတည်းက စတင် သွားရောက်ခဲ့သည်။ ထိုပါတီများအားလုံးသည် သက်ဆိုင်ရာ လူမျိုးစု အသိုင်းအဝန်းတွင် ခိုင်မာသော ထောက်ခံမှုရရှိထားသည့် ပါတီများ ဖြစ်သည်။
ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက် တောင်ကြီးရှိ NLD ရုံးတွင် မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညို၏ NLD အဖွဲ့နှင့် ဝ၊ လားဟူနှင့် ရှမ်း ၃ ပါတီကိုယ်စားလှယ်များ တွေ့ဆုံစဉ်/ National League for Democracy-Shan / Facebook
ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်နေ့အထိ NLD ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ကချင်၊ လီဆူး၊ ရှမ်း၊ လားဟူ၊ ဝ၊ ပအိုဝ်း၊ တအန်းနှင့် ကယန်းတိုင်းရင်းသားများကို ကိုယ်စားပြုသည့် ပါတီ ၁၀ ခုနှင့် သီးခြားစီတွေ့ဆုံပြီး ဖြစ်သည်။ ထိုတွေ့ဆုံမှုတိုင်းကို NLD ၏ ပြည်နယ်အခြေစိုက်ရုံးများတွင် ပြုလုပ်သည်။
သို့သော် NLD ရုံးများတွင်သာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့် မူဝါဒသည် အချို့ တိုင်းရင်သားပါတီများကို စိတ်ပျက်စေသည်။
NLD က ရွေးချယ်သောနေရာကို လက်မခံနိုင်သောကြောင့် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် စီစဉ်ထားသည့် NLD နှင့် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (MUP) တို့အကြား တွေ့ဆုံမှုနှင့် ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် စီစဉ်ထားသည့် NLD နှင့် ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (KySDP) တို့အကြား တွေ့ဆုံပွဲများကို မကျင်းပဖြစ်ပေ။
၎င်းတို့၏ မဲဆန္ဒနယ်များတွင် လူထုထောက်ခံမှု အခိုင်အမာရရှိကြသော MUP နှင့် KySDP တို့က ကြားနေရာတခုခုတွင် ဆွေးနွေးခြင်းသည် ပိုမိုလွတ်လပ်မည်ဟု ပြောသည်။ ထို့အပြင် ပါတီတခုချင်းဆီမှ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရသည့် ကိုယ်စားလှယ်များကိုသာ NLD က တွေ့ဆုံမည်ဆိုသော အချက်ကိုလည်း ထိုပါတီ နှစ်ခုက လက်မခံပေ။
ထိုသို့ အပေးအယူ အလျှော့အတင်း မရှိခြင်းအတွက် NLD နှင့် တိုင်းရင်းသာပါတီ နှစ်ခုစလုံး ဝေဖန်ပြစ်တင်ခံကြရသည်။
ထိုသို့သော ဝေဖန်မှုများအကြားတွင် MUP အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နိုင်စံတင်က ၎င်းတို့ပါတီသည် ကြားနေရာတခုတွင် နှစ်ပါတီတွေ့ဆုံရေးမူကို ဆုပ်ကိုင်ထားကြောင်းနှင့် ပါတီတခုခု၏ ရုံးတွင် တွေ့ဆုံခြင်းသည် မသင့်တော်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
အကြောင်းပြချက်တွင် NLD သည် တိုင်းရင်းသားပါတီများကို လက်အောက်ခံဖြစ်စေလိုပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည့်အစား တောင်းဆိုမှုများသာ လုပ်နေသည်ဟု ဆိုကာ အနိုင်ရပါတီအနေဖြင့် အသာစီးရရန် ကြိုးစားနေသည်ဟု စွပ်စွဲသည်။
MUP နှင့် မပြေလည်သကဲ့သို့ပင် နောက် ရက်သတ္တပတ် တပတ်ကျော်အကြာတွင် KySDP အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ခူးသဲရယ်ကလည်း ၎င်းတို့ပါတီသည် NLD နှင့် တတိယနေရာတခုတွင်သာ တွေ့မည်ဟု ဆိုသည်။
ထိုသို့သော ပြောဆိုချက်ကို ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုက ပယ်ချပြီး NLD ၏ ရည်မှန်းချက်မှာ လွှမ်းမိုးရန် မဟုတ်ဘဲ ဒေသခံပါတီများ ပြောကြားလိုသည်များကို ဂရုတစိုက် နားထောင်လိုသဖြင့် ပါတီများနှင့် တွေ့ဆုံလိုခြင်းဟု တုံ့ပြန်သည်။ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့နောက်ပိုင်း စတင်မည့် လွှတ်တော်သစ်မခေါ်မီ မွန်ပြည်နယ်သို့ ပြန်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သူက ပြောသည်။
ထိုသို့ နှစ်ဖက် မလိုက်လျောနိုင်မှုသည် မကြာသေးခင်နှစ်များက ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ဖြစ်ရပ်များမှ အရင်းခံလာခြင်း ဖြစ်ပုံရသည်။
NLD ၊ မွန်နှင့် ကရင်နီ တိုင်းရင်းသားလူများစုများအကြား ဆက်ဆံရေးသည် NLD ဥက္ကဌနှင့် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ အမွေအနှစ်ကို မြှင့်တင်ရေး NLD ၏ ကြိုးပမ်းမှုများကြောင့် လွန်စွာ ထိခိုက်ခဲ့ရသည်။
ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် မြစ်ကြီးနားရှိ NLD ရုံးတွင် ကချင်နှင့် လီဆူ ပါတီကိုယ်စားလှယ်များနှင့် NLD ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်/ National League for Democracy-Kachin / Facebook
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဒေသခံ မွန်တိုင်းရင်းသားများက ကန့်ကွက်နေသည့်ကြားမှ မော်လမြိုင်နှင့် ချောင်းဆုံကို ဆက်သွယ်သည့် ၁.၅ ကီလိုမီတာရှည်သော သံလွင်မြစ်ကူးတံတားကို NLD က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတံတား ဟု အမည်ပေးသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ရိုးသားတည်ကြည်မှုကို ဂုဏ်ပြုရန်၊ သူ၏ အမွေအနှစ်ကို သတိရစေရန်နှင့် သူစတင်ခဲ့သော ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်ကို အထိမ်းအမှတ်ပြုရန် ဟု NLD က ရည်ရွယ်သည်။
တိုင်းရင်းသား လူနည်းစု ဒေသတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအား ဂုဏ်ပြုမှုသည် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း အာဏာရ NLD သည် သင်ခန်းစာယူခြင်း မရှိပေ။ ကယားပြည်နယ်အစိုးရက ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ဒေသခံများ၏ ဆန္ဒကို ဆန့်ကျင်ကာ လွိုင်ကော်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်တုကို စိုက်ထူပြန်သည်။
ထိုလုပ်ရပ်က ကယားပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ဒေသခံလူငယ်များအကြားတွင် နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုများကို ဖြစ်စေသည်။ ထိုရုပ်တု စိုက်ထူခြင်းကို ဆန့်ကျင်သူများအား ပြည်နယ်အစိုးရက ဖြိုခွင်းမှုဖြင့် တုံ့ပြန်ကာ ဖမ်းဆီးထောင်ချသည်။ ထိုသို့ နိုင်ငံရေးတွက်ချက်မှု အမှားအယွင်းသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်က NLD ကို ထောက်ခံသည့် လူငယ်အများအပြားကို စိတ်ပျက်စေပြီး၊ ၂၀၂၀ တွင် ၎င်းတို့ ရပ်တည်ချက်ပြောင်းကာ ဒေသခံ KySDP ပါတီကို ထောက်ခံကြသည်။
သို့သော် ၎င်းက KySDP သည် နိုင်ငံရေး ပါးနပ်မှု ကင်းမဲ့သည်ဟု ရှုမြင်ကြောင်း၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တွေ့ဆုံမှုမရှိခြင်းက NLD က အဆိုပြုသည့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအတွက် ၎င်းတို့ ရပ်တည်ချက်ကို ပြောရန်နှင့် အဓိက တိုင်းရင်းသားရေးရာ ပြဿနာများကို ပြောဆိုခွင့် ဆုံးရှုံးသည်ဟု ဆိုသည်။
လတ်တလော တွေ့ဆုံမှုပျက်ခဲ့ရသည့်အပေါ် NLD တွင် ရည်ရွယ်ချက်ကောင်း စိတ်စေတနာကောင်း ရှိသော်လည်း တိုင်းရင်းသားများ၏ ထောက်ခံမှုကို ရရှိအောင်ကြိုးစားရာတွင် အားနည်းချက်များရှိသည်ဟု ကယားပြည်နယ်မှ ပါတီများနှင့်နီးစပ်သည့် အမည်မဖေါ်လိုသော သတင်းရင်းမြစ်တခုက ဆိုသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများအကြား တွေ့ဆုံပြောဆိုရေးအတွက် စိန်ခေါ်ချက်သည် ဆွေးနွေးမည့်နေရာ မသတ်မှတ်နိုင်ဘဲ ပျက်ခဲ့ရသော အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးပွဲတချို့နှင့် ပုံစံတူလာကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီနှင့် ဒေသခံပါတီများအကြား ဆက်သွယ်ပေးရသည့် ဒေါက်တာ အောင်မိုးညို ဦးဆောင်သောအဖွဲ့ကို ဒေသခံပါတီများနှင့် တွေ့ဆုံရေးရည်မှန်းချက် အောင်မြင်ရေးအတွက် လုပ်သာကိုင်သာ လုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အာဏာပေးအပ်ခဲ့သင့်ကြောင်း လေ့လာသူများက ထောက်ပြကြသည်။
လတ်တလော မပြေလည်မှုများက NLD သည် ၎င်းတို့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား အဓိကနှင့် သာမည အချက်များ ခွဲခြား သတ်မှတ်ပေးကာ တွေ့ဆုံမည့်နေရာကဲ့သို့ သာမည အချက်များကို ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ခွင့်ရှိသည့် မူဝါဒ ချမှတ်ထားခြင်း မရှိကြောင်းကို ပြသနေသည်ဟု နိုင်ငံရေးသုတေသီ ဦရဲထွန်းက သုံးသပ်သည်။ ထိုအစား NLD သည် ဆွေးနွေးရန် သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာကိုသာ အသေဆုပ်ကိုင်နေသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုများတွင် ၉ နှစ်ကြာ အတွေ့အကြုံရှိသော ဦးမျိုးဝင်းက ဆွေးနွေးမည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတိုင်းတွင် ပြောဆိုညှိနှိုင်းမည့် အကြောင်းအရာသည် ဆွေးနွေးမည့်နေရာထက် ပိုမိုအရေးကြီးပြီး၊ ယခု NLD အနေဖြင့်လည်း သတ်မှတ်နေရာတွင်သာ တွေ့ဆုံလိုခြင်းနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသူများကိုသာ တွေ့ဆုံမည်ဆိုသော ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်များ မရှိသင့်ဟု ဆိုသည်။
သူတို့ ဘာကြောင့် တွေ့ကြသလဲ
ကချင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ပါတီ (KSPP) ဥက္ကဌ ဒေါက်တာတူးဂျာက “နိုင်ငံရေးမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးက နေရာထက်ပို အရေးကြီးတယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။
အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်နေရာ သတ်မှတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်သည့် NLD ၏ တင်းမာသော သဘောထားကို မနှစ်မြို့ကြသော်လည်း ထိုသို့တွေ့ဆုံခြင်းသည် ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့် တိုင်းရင်းသားအရေးကို ဆွေးနွေးရန် တိုင်းရင်းသားပါတီများအတွက် အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးသောကြောင့် တွေ့ဆုံရေးသည် အရေးကြီးသည်ဟု နိုင်ငံရေးသမား အများစုက ယူဆသည်။
ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွင် KSPP က ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် NLD ၏ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရ ဖွဲ့စည်းရေးတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် ၎င်းတို့၏ သဘောထားများကို ပြောခဲ့သည်။ KSPP ပါတီသည် မြစ်ကြီးနားတွင် NLD နှင့် ပထမဆုံးတွေ့ဆုံသည့် ပါတီ ၃ ခုအနက်တခု ဖြစ်သည်။
ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်က ရှမ်းပြည်နယ်တွင် NLD နှင့် တွေ့ဆုံသည့် တအန်းနှင့် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားပါတီ ကိုယ်စားလှယ်များက ပြည်ထောင်စုရေးရာများကို ဦးစားပေးသည့်အတွက် NLD ရုံးသို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။
ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက် တောင်ကြီးရှိ NLD ရုံးတွင် ကယန်းအမျိုးသားပါတီ ကိုယ်စားလှယ်များ လာရောက်တွေ့ဆုံအပြီး/ National League for Democracy-Shan / Facebook
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ၎င်းတို့သည် NLD နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ပြောခွင့်ရသူနှင့် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး စိုင်းကျော်ညွန့်က ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်က NLD နှင့် တွေ့ဆုံမှု အပြီးတွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။ SNLD သည် နိုဝင်ဘာလ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး တနိုင်ငံလုံးတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာ ၄၂ နေရာနိုင်ပြီး တနိုင်ငံလုံးတွင် တတိယအများဆုံး အနိုင်ရပါတီ ဖြစ်သည်။ သောကြာနေ့ တွေ့ဆုံမှုမတိုင်မီကလည်း NLD နှင့် ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်နေ့တွင်တကြိမ်၊ ၁၄ ရက်နေ့တွင်တကြိမ် စုစုပေါင်း ၂ ကြိမ် အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
မွန်နှင့် ကယားပြည်နယ်တွင် တွေ့ဆုံမှု မဖြစ်ခဲ့သည့်အတွက် ထိုသို့မဖြစ်လိုကြောင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ၎င်းတို့ပါတီ၏သဘောထားကို ပြောကြားခဲ့ကြောင်း SNLD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောဆိုသည်။ ထို့အပြင် SNLD က မွန်နှင့် ကယားပါတီများနှင့် NLD အကြား တွေ့ဆုံနိုင်ရေး ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်လည်း ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်အတွင်း NLD ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မှ ပါတီများအကြား တွေ့ဆုံမှုများ အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြစ်ခဲ့ခြင်းသည် NLD ၏ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရသစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ပါတီများမှ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးသမားများ ပိုမိုပါဝင်လာမည့် လက္ခဏာဖြစ်နိုင်သည်။
သို့သော် NLD သည် မွန်နှင့်ကယားပါတီများကဲ့သို့သော လူမျိုးစု အခြေပြု နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မရှိဘဲ ကိုယ်စားပြုမှု စုံလင်အောင် ဆောင်ယူနိုင်မည်လားဆိုသည့် မေးခွန်းမှာ ဆက်လက် ကျန်ရှိနေဆဲပင် ဖြစ်သည်။
(Nyein Nyein ၏ Venue Squabbles Complicate NLD’s Outreach Efforts to Myanmar’s Ethnic Parties ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)
]]> ထိုင်းနိုင်ငံ ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းတွင် ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရသည့် မြန်မာလုပ်သားများ https://burma.irrawaddy.com/article/2021/01/13/236383.html Wed, 13 Jan 2021 06:57:45 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=236383
The post ထိုင်းနိုင်ငံ ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းတွင် ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရသည့် မြန်မာလုပ်သားများ appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> မြန်မာပြည်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး ဧပြီလတွင် စ ထိုးနိုင် https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/15/234952.html Tue, 15 Dec 2020 12:57:34 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=234952
The post မြန်မာပြည်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး ဧပြီလတွင် စ ထိုးနိုင် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ကိုဗစ် ၁၉ ကာကွယ်ဆေး ဝယ်ယူ ထိုးနှံပေးနိုင်ရေး မြန်မာပြင်ဆင်နေ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/07/234444.html Mon, 07 Dec 2020 05:14:35 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=234444
မည်သူကို အရင်ကာကွယ်ဆေးပေးမည်နှင့် မည်သို့ခွဲဝေမည်ကမူ ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူပြီးနောက် အသုတ်လိုက် ရောက်ရှိမှုပေါ် မူတည်သည်။
The post ကိုဗစ် ၁၉ ကာကွယ်ဆေး ဝယ်ယူ ထိုးနှံပေးနိုင်ရေး မြန်မာပြင်ဆင်နေ appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> သံလွင်မြစ်ဘေးက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သူရဲကောင်း https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2020/12/05/234368.html Sat, 05 Dec 2020 03:10:32 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=234368
၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် ဂိုးလ်မင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆုရှင် ကရင်တိုင်းရင်းသား စောပေါစိန်ထွားနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်။
The post သံလွင်မြစ်ဘေးက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သူရဲကောင်း appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ဖက်ဒရယ်စနစ် ဖြစ်ဖို့ ဝေါဟာရ အကျပ်အတည်းက ကန့်လန့်ခံနေ https://burma.irrawaddy.com/article/2020/10/20/232013.html Tue, 20 Oct 2020 08:18:00 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=232013
The post ဖက်ဒရယ်စနစ် ဖြစ်ဖို့ ဝေါဟာရ အကျပ်အတည်းက ကန့်လန့်ခံနေ appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှု မြင့်မားရာနေ အသက် ၆၀ ကျော်သူများ ကြိုတင်မဲပေးနိုင် https://burma.irrawaddy.com/election-2020/2020/10/18/231868.html Sun, 18 Oct 2020 06:05:34 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=231868
ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ခွဲများသည် ကြိုတင်မဲပေးခြင်းကို အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့မှ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်အတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
The post ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှု မြင့်မားရာနေ အသက် ၆၀ ကျော်သူများ ကြိုတင်မဲပေးနိုင် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ရှောင်လွှဲမရသော ပြဿနာ https://burma.irrawaddy.com/opinion/viewpoint/2020/09/30/230749.html Wed, 30 Sep 2020 05:33:47 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=230749
ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသည် မည်သည့်အသွင်ဆောင်မည်နည်း။
The post ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ရှောင်လွှဲမရသော ပြဿနာ appeared first on ဧရာဝတီ.
ယခုနှစ် အစောပိုင်း၌ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်အချို့ ပြင်ဆင်နိုင်ရေး လွှတ်တော်တွင်း အကြိတ်အနယ်ဆွေးနွေးပြီးကတည်းက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအသံများ တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲကို နိုင်ငံရေးသမားများ အာရုံစိုက်နေရခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုတိတ်ဆိတ်မှုသည် ခဏသာဖြစ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ကာလအတွင်း တစတစ ပြန်ပေါ်လာသည်။
အာဏာရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) အပါအဝင် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိရန် ကြိုးပမ်းနေသော နိုင်ငံရေးပါတီကြီးများသည် ယခုလအစောပိုင်း မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု စချိန်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ အဆိုပြုချက်ကို ၎င်းတို့၏ မူဝါဒများတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြလာကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးတွင် ဒီမိုကရေစီမဆန်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသည် အဓိကကျသောကြောင့် ထိုပြင်ဆင်ရေးအတွက် ဆက်လက် အားထုတ် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။
သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသည် မည်သည့်အသွင်ဆောင်မည်နည်း ဆိုသည့် မေးခွန်းတော့ ရှိသည်။
စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်သည့် NLD ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းတွင် တိုင်းရင်းသားအရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် လုံခြုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အပြင် စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖြစ်ထွန်းစေမည့် ဖွဲ့စည်ပုံအခြေခံဥပဒေတခု ပေါ်ပေါက်ရေးကိုလည်း ရည်ရွယ်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားသည်။
နှစ်ကာလကြာရှည် ကြိုးပမ်းနေသည့် NLD ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ပန်းတိုင်သည် မအောင်မြင်သေးပါ။
အကြောင်းရင်းတခုတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ မည်သည့်ပုဒ်မပြင်ဆင်ချက်ကိုမဆို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း၏ ထောက်ခံမှုလိုအပ်ပြီး လွှတ်တော်၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်း စစ်တပ်က ထိန်းချုပ်ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
မတ်လတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် NLD အဆိုပြုသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက် ၁၁၄ ချက်အနက် ၄ ခုကို အတည်ပြုခဲ့သည်။ လွှတ်တော်တွင် ၉ ရက်ကြာ ဆွေးနွေးမဲခွဲပြီးနောက် ရလာသည်မှာ ပြဋ္ဌာန်းချက် ၃ ခုနှင့် ပုဒ်မတခုပါ စကားအသုံးအနှုန်းများကို ပြင်ဆင်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
အစိုးရ မဏ္ဍိုင်အားလုံးတွင် တပ်မတော်နှင့် စစ်ဖက်အကြီးအကဲကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက ပေးအပ်ထားသည့် အထူးလုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် အခွင့်ထူးများကို လျှော့ချမည့် အဓိက ပြင်ဆင်ချက်များကို တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ မဟာမိတ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ပယ်ချခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အုပ်စုနှစ်စုက လွှတ်တော်နေရာအားလုံး၏ ၃၁ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ အတားအဆီးများကို ကိုးကားဖော်ပြပြီး NLD ဥက္ကဌ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့် NLD ကို မဲပေးရန် စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက် မဲဆွယ် မိန့်ခွန်းတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲတွင် အရပ်သားကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၇၀၀၀ ခန့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် လွှတ်တော်နေရာ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းအနက် ၆၇ ရာခိုင်နှုန်းကို သူမ၏ ပါတီက လိုအပ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်၌ USDP ပါတီကိုယ်စား ရုပ်မြင်သံကြားမှ ပြောကြားသည့် မဲဆွယ်မိန့်ခွန်းတွင် ဥက္ကဌ ဦးသန်းဌေးကလည်း အချို့သော ဥပဒေများနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှ ပုဒ်မအချို့ကို ပြင်ဆင်ရန် ကြိုးပမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးသည် ၎င်းတို့၏ ဦးစားပေးအဆင့်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် USDP ပါတီ၏ အားထုတ်မှုများသည် ဖက်ဒရယ်စနစ်၊ ပြည်ထောင်စုနှင့် ဒီမိုကရေစီ အနှစ်သာရများကို ချက်ချင်း ထင်ဟပ်မည့် ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်မှုကို ဆောင်ရွက်မည်ဟု ကတိပြုသွားသည်။
USDP က ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်များ ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မကို ပြင်ဆင်ရန် ထုတ်နှုတ်ပြောကြားခဲ့သည်။ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်များကို ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းလွှတ်တော်နေရာ အများစုအနိုင်ရသည့်ပါတီက ခန့်အပ်ရနိုင်ရေး ၎င်းတို့၏ အဆိုပြုချက်သည် ယေဘူယျအားဖြင့် လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားများနှင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အခြေစိုက် နိုင်ငံရေးပါတီငယ်များ၏ အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်သည်။
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တွင်း နိုင်ငံရေးကို ထိန်းချုပ်ရန် မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် USDP က ထိုအချက်ကို မောင်ပိုင်စီးခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ပြင်ဆင်ရေး ပြောဆိုချက်သည် အပေါ်ယံလား စေတနာအရိုးခံဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုသည်လား ဆိုသည်ကို မသိနိုင်သော်လည်း မကြာသေးသောအတိတ်ကို လမ်းညွှန်အဖြစ် လေ့လာနိုင်သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် USDP သည် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် နေရာအများစုရသော်လည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ပြည်နယ်အစိုးရကို ဦးဆောင်ခွင့်မရ။ NLD သည် တနိုင်ငံလုံးတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နေရာအများစုကို အနိုင်ရသောကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်များအားလုံးကို ခန့်အပ်ခွင့်ရသည်။ ၂၀၁၀ မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထိ USDP အနိုင်ရခဲ့သည့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ခေတ် တွင်လည်း အလားတူပင် ထိုအခွင့်အရေးရခဲ့သည်။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၄ ပုံ ၁ ပုံကို ရယူထားခြင်းနှင့် ကာကွယ်ရေး၊ ပြည်ထဲရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနများကို ချုပ်ကိုင်ထားခြင်း စသည့် စစ်ဖက်၏ နိုင်ငံရေးအခွင့်ထူးများကို လျှော့ချမည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက်ကို ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတပိုင်း USDP ခေါင်းဆောင်များ သဘောတူ လက်ခံခြင်း လိုလားခြင်း ရှိ မရှိ မေးခွန်း ရှိနေသည်။
ပါတီကြီးနှစ်ခုအကြား ကွဲလွဲချက်များကို ဖယ်ထားပြီး ရွေးကောက်ပွဲအလွန် မည်သည့်အစိုးရသစ်အောက်တွင်မဆို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး အောင်မြင်နိုင်ခြေ ရှိ မရှိကို မေးခွန်းထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD က အများစုအနိုင်ရရှိမည် ဆိုစေကာမူ စစ်ဖက်၏ အာဏာကိုလျှော့ချမည့် အလားအလာမရှိလျှင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံမှ လက်ရှိအဆိုပြုထားသည့် ပုဒ်မ ပြင်ဆင်ချက်များကို ထပ်မံတင်သွင်းပါကလည်း မတ်လက မိမိတို့တွေ့ရသည့် စိတ်ပျက်ဖွယ် ရလဒ်ဖြင့်သာ ထပ်မံအဆုံးသတ်ရနိုင်သည်။
ယင်းအကျပ်အတည်းကို ရှောင်ရှားရန် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော နည်းလမ်းတခုမှာ တနိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်စာချုပ် (NCA) တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် အစိုးရ၊ စစ်ဖက်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ (EAOs) က သဘောတူ ချုပ်ဆိုထားသော ပြည်ထောင်စု သဘောတူစာချုပ်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကို အာရုံစိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း သူ၏ သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ အပိတ်မိန့်ခွန်းတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး အားထုတ်မှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရန် အသားပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသူများသည် ၂၀၂၀ အလွန် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး အဆင့်လိုက်လုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်ရန် အုတ်မြစ်ချထားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ထို လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး၊ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးနှင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးစသည့် လုပ်ငန်းစဉ် ၅ ရပ် ပါဝင်သည်ဟု သူက ဆိုထားသည်။
ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်သည် အနာဂတ် ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်ထားသော သဘောတူစာချုပ်ဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်တွင် ဖယ်ဒရယ်အခြေခံမူများကို အာမခံသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေတရပ် ရှိလာရေးအတွက် EAOs အဖွဲ့များ၊ စစ်တပ်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ အပါအဝင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသူများအားလုံး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် EAOs ၁၀ ဖွဲ့တွင် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU)၊ ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS)၊ ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP)၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP)၊ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF)၊ ပအိုးဝ် အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ချုပ် (PNLO) ၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ( ABSDF)၊ ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင်တပ်မတော် (DKBA)၊ ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်-ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ (KNLA-PC) နှင့် လားဟူ ဒီမိုကရက်တစ် အစည်းအရုံး (LDU) တို့ပါဝင်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးရယူပြီး အစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေး ညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်နေသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကို မတူညီသည့် နည်းလမ်းနှစ်သွယ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း ပြောဆိုထားသည်။ တနည်းမှာ လွှတ်တော်လမ်းကြောင်းမှဖြစ်ပြီး အခြားတနည်းမှာ လွှတ်တော်ပြင်ပ NCA လမ်းကြောင်းမှ ပြောင်းလဲရေး ဖြစ်သည်။
ဖြစ်ရပ်များ ပြန်လည်လေ့လာပါက NLD သည် ကနဦးတွင် NCA လမ်းကြောင်းဖြစ်သော ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများမှတဆင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်နိုင်ရေး ကြိုးစားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။
သို့သော် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပြည်နယ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများ ရေးဆွဲလိုပါက ပြည်ထောင်စုမှ မခွဲထွက်ဟု EAOs များကတိပြုရမည်ဆိုသည့် တပ်မတော်၏ တောင်းဆိုမှုကြောင့် ဆွေးနွေးပွဲများ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် လမ်းကြောင်းလွဲပြီး အကျပ်အတည်းဖြစ်ကာ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ငြိမ်းချမ်းရေး ညှိနှိုင်းမှုများ ရွှေ့ဆိုင်းသွားခဲ့သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် NLD သည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လွှတ်တော်တွင်းမှ ပြင်ဆင်ရေးကို စတင်ခဲ့သည်။ ထိုပြင်ဆင်ရေးကြိုးပမ်းမှုသည် တနှစ်ကျော်ကြာခဲ့သော်လည်း အတိုက်အခံ USDP ပါတီနှင့် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆန့်ကျင်မှုနှင့် ကြုံရသည်။
ဖက်ဒရယ်မူများကို ဆွေးနွေးရာတွင် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသူများ အဓိကရင်ဆိုင်ရသည့် စိန်ခေါ်မှုများ အနက်တခုမှာ ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စဖြစ်ပြီး ယခုနှစ် ငြိမ်းချမ်ရေးဆွေးနွေးပွဲများတွင် သဘောတူနိုင်ခြင်း မရှိသေးဘဲ ဆက်လက် ဆွေးနွေးရန် လျာထားကြသည်။
“ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေ ရေးဆွဲနိုင်ရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေက အခုမှ အစပဲရှိသေးတာ။ အများကြီးလုပ်စရာလိုသေးတယ်”
“ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေ ရေးဆွဲနိုင်ရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေက အခုမှ အစပဲရှိသေးတာ။ အများကြီးလုပ်စရာလိုသေးတယ်”ဟု ငြိမ်းချမ်းရေး ညှိနှိုင်းမှုများတွင် ပါဝင်သူ KNU အမြဲတမ်းကော်မတီဝင် ပဒို စောတောနီးက ဆိုသည်။
တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကို အာမခံသည့် ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ ရရှိရေးကို ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရန် လိုသည်မှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များ၏ တောင်းဆိုမှုလည်း ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများအား ၎င်းတို့၏ ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံများကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ရေးဆွဲခွင့် ပြုခြင်းဖြင့် စတင်ရမည်ဟု ဆိုသည်။
ပြည်ထောင်စု သဘောတူစာချုပ်တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကို အာမခံသည့် ဘုံဖက်ဒရယ်မူများ ရရှိစေရန် ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလတွင် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များသည် EAOs များနှင့် အစိုးရသစ်နှင့်လက်တွဲဆောင်ရွက်မှသာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသည် ပိုမိုမြန်ဆန်လာမည် ဖြစ်သည်။
( ငြိမ်းငြိမ်းသည် ဧရာဝတီ အင်္ဂလိပ်ပိုင်း၏ တွဲဘက်အယ်ဒီတာဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ Amending Myanmar’s Constitution: an Issue That Will Not Go Away ကို ဘာသာပြန်သည်။)
]]> သံရုံးတွင်သာ မဲရုံဖွင့်မည့်အတွက် ထိုင်းရှိ မြန်မာလုပ်သားအများစု မဲပေးရန် မသေချာ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/28/230609.html Mon, 28 Sep 2020 05:17:59 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=230609
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် ဘန်ကောက်မြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးနှင့် ချင်းမိုင်မြို့ရှိ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးတွင်သာ ကြိုတင်မဲပေးကြရမည် ဖြစ်သည်။
The post သံရုံးတွင်သာ မဲရုံဖွင့်မည့်အတွက် ထိုင်းရှိ မြန်မာလုပ်သားအများစု မဲပေးရန် မသေချာ appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ကြိုတင်မဲပေးခွင့်ရရေး အင်တိုက်အားတိုက် ကူညီသူ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ https://burma.irrawaddy.com/article/2020/09/24/230457.html Thu, 24 Sep 2020 08:57:23 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=230457
နေရာအတော်များများတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ကြိုတင်မဲပေးခွင့်ရရေးအတွက် အဓိကအခန်းမှ ပါဝင်နေကြသည်။
The post ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ကြိုတင်မဲပေးခွင့်ရရေး အင်တိုက်အားတိုက် ကူညီသူ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ appeared first on ဧရာဝတီ.
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများ ကြိုတင်မဲပေးခွင့်ရရေး လိုအပ်သော လျွှောက်လွှာပုံစံများ ဖြည့်စွက်မှုကို သတ်မှတ်ကာလမတိုင်ခင် ဇူလိုင်လနှောင်းပိုင်းနှင့် သြဂုတ်လအစောပိုင်း အထိ စေတနာ့ဝန်ထမ်းလူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများက အင်တိုက်အားတိုက် ကူညီပေးခဲ့ကြသည်။ ထိုအထဲတွင် ထိုင်းနိုင်ငံမြို့တော် ဘန်ကောက်အနီးရှိ ဘန်ဘွန်ခရိုင်မှ မယမင်းလည်း အပါအဝင် ဖြစ်သည်။
သူမ နေအိမ်တွင် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများကို ကြိုဆိုလက်ခံ၊ ပုံစံများကို အချက်အလက် မှန်ကန်စွာဖြည့်ပြီး နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကို မိတ္တူကူးကာ လျှောက်လွှာများနှင့် ချိတ်တွဲပေးသည်။ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများသည် ပုံမှန် အလုပ်ဆင်းချိန်အတိုင်း လုပ်ရသူရှိသကဲ့သို အချိန်ပိုဆင်းရသူများလည်း ရှိသဖြင့် ညဦးပိုင်းမှ ည ၁၀ နာရီပတ်ဝန်ကျင်းအထိ သူမ နေအိမ်တွင် လူအများ စုရုံးနေလေ့ရှိသည်။
ဘန်ဘွန်ခရိုင်ရှိ နေအိမ်တွင် ကြိုတင်မဲထည့်ရန် လျှောက်လွှာ ပုံစံ-၁၅ ဖောင်ဖြည့်ခြင်းကို မယမင်းက ကူညီပေးသည်/ငြိမ်းငြိမ်း
စေတနာ့ဝန်ထမ်းအများအပြားအနက် သူမကဲ့သို့ ကူညီနေသူအချို့မှာ တသီးပုဂ္ဂလများ၊ အချို့မှာ စမွတ်စခွန်ခရိုင် မဟာချိုင်တွင် အခြေစိုက်သည့် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား အခွင့်အရေး ကွန်ရက်ကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသည့်ရက်ဖြစ်သည့် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဟု ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC) က ကြေငြာထားသည်။ ယခင်နှင့်မတူသည့်အချက်မှာ ပြည်ပရောက် နိုင်ငံသားများအနေဖြင့် ကြိုတင်မဲပေးရန် မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်ဟု (UEC) က ကြေညာပြီးချိန် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားထောင်ပေါင်းများစွာ သည် ကြိုတင်မဲစာရင်း မှတ်ပုံတင်ရန် စည်းရုံးလှုပ်ရှားလာခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် မိမိတို့၏ မဲဆန္ဒနယ် ပြင်ပရောက်နေသော မဲပေးခွင့်ရှိသူများသည် ကနဦးတွင် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ ၅ ရက်အတွင်း ကြိုတင်မဲဖောင် (ပုံစံ ၁၅) တင်သွင်းရန်လိုသည်။ (နောက်ပိုင်း ပုံစံ ၁၅ တင်လိုသူ များပြားသည့်အတွက် မဲပေးခွင့်မဆုံးရှုံးစေရန်ဟုဆိုကာ UEC က သြဂုတ်လလယ်အထိ ရက်တိုးပေးခဲ့သည်။)
“ထိုင်းနိုင်ငံက ကျမတို့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအများအပြားက ကြိုတင်မဲပေးဖို့ စိတ်ဝင်စားကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာလုပ်ရမယ်၊ ပုံစံတွေကို ဘယ်မှာယူရမယ်ဆိုတာကို သူတို့မသိကြဘူး။ သတင်းအချက်အလက်တွေကိုတော့ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကနေ ရနေကြတယ်။ ဒါကြောင့် လျှောက်လွှာတင်နိုင်ဖို့ ကျမ သူတို့ကို ကူညီနေတာ” ဟု သူကူညီနေရသောအကြောင်းကို မယမင်းက ရှင်းပြသည်။
“နောက်ဆုံးမှာ ကိုယ့်မိသားစုအတွက် ကိုယ်ပဲလုပ်ရမှာမို့ ဘယ်သူတွေအာဏာရနေတယ်၊ ဘယ်လို အစိုးရမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သူတို့စိတ်မဝင်စားဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ လွတ်လပ်စွာမဲပေးဖို့ ကျမတို့ရဲ့ အခွင့်အရေးကို ရအောင်ယူရမယ်လို့ သူတို့ကိုပြောရတယ်”
သို့သော် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတိုင်း မဲပေးရန် စိတ်ဝင်စားကြသည် မဟုတ်ပေ။ “တချို့ကျတော့လည်း စိတ်မဝင်စားကြဘူး” ဟု သူပြောသည်။
“နောက်ဆုံးမှာ ကိုယ့်မိသားစုအတွက် ကိုယ်ပဲလုပ်ရမှာမို့ ဘယ်သူတွေအာဏာရနေတယ်၊ ဘယ်လို အစိုးရမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သူတို့စိတ်မဝင်စားဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ လွတ်လပ်စွာမဲပေးဖို့ ကျမတို့ရဲ့ အခွင့်အရေးကို ရအောင်ယူရမယ်လို့ သူတို့ကိုပြောရတယ်”ဟု သူမက ပြောသည်။
မယမင်းသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း ကြိုတင်မဲပေးခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ကြိုတင်မဲ လျှောက်လွှာတင်စဉ်နှင့် ကြိုတင်မဲပေးသည့်နေ့တွင် အခက်အခဲများရှိခဲ့ကြောင်း သူမက ဆိုသည်။ ယခုအချိန်တွင် မြန်မာသံရုံးသည် လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ မျှဝေနေသောကြောင့် အခြေအနေမှာ ၂၀၂၀ တွင် လွန်စွာ ပြောင်းလဲသွားကြောင်း သူပြောသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်က ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသား ၅၆၁ ဦး ကြိုတင်မဲပေးခဲ့ကြပြီး ထိုသူများတွင် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား အနည်းငယ်သာပါကြောင်း UEC ၏ မှတ်တမ်းအရ သိရသည်။ ဘန်ကောက်ရှိ သံရုံးတွင် ကြိုတင်မဲပေးရန် အချိန်တရက်သာ ရသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်က နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသား သုံးသောင်းခန့် ကြိုတင်မဲပေးရန် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး စင်္ကာပူတွင် ကြိုတင်မဲပေးသူ အများဆုံးဖြစ်သည်။ (ယခုနှစ်အတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ကြိုတင်မဲ လျှောက်လွှာ တသိန်းကျော် ရရှိထားကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက လွန်ခဲ့သော နှစ်ပတ်ခန့်က ထုတ်ပြန်ထားသည်။) ၂၀၁၅ တွင် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် အခြား နိုင်ငံအများအပြားတွင် မဲပေးလိုသူများသည် မဲမပေးနိုင်ဘဲ ဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုစဉ်က ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအချို့က ကြိုတင်မဲပေးနိုင်ကြောင်းကို ထိုသို့ကြိုတင်မဲပေးရသည့်နေ့ ဖြစ်သည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ ရောက်မှသာ သိရှိကြရပြီး ကြိုတင်မဲပေးရန် မည်သည့်နေရာတွင် မည်သို့ တောင်းဆိုရမည်ကို မသိကြဟု ပြောဆိုခဲ့ဖူးသည်။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် သံရုံးသည် ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသားများကို အသိပေးရန်၊ မဲပေးရမည့် ကြိုတင်မဲရုံနေရာများ သတ်မှတ်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး၊ မဲပေးလိုသူများ ပါဝင်ခွင့် အတားအဆီးဖြစ်ခဲ့သည်။
လာမည့်နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲအတွက် မြန်မာသံရုံး၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ ပြောင်းလဲလာသည်။ သာမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ အလုပ်လုပ်ခွင့်ကိုင်ဆောင်သော နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (CI) ကဲ့သို့သော တရားဝင် စာရွက်စာတမ်းကိုင်ဆောင်သော မည်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားမဆို ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်မဲပေးနိုင်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာမဲဆန္ဒရှင်များကို သံရုံးက ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားခဲ့သည်။
မြန်မာသံရုံးသည် သတင်းအချက်အလက်များကို မျှဝေရန် မြန်မာပြည်သူများအကြား ရေပမ်းအစားဆုံးနှင့် အကျယ်ပြန့်ဆုံး လူမှုကွန်ရက်ဖြစ်သည့် ဖေ့ဘွတ်ကို အသုံးပြုသည်။ ဖေ့ဘွတ်၏ ကျေးဇူးကြောင့် မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် အင်တာနက် 3G/4G ချိတ်ဆက်ကာ ဖေ့ဘွတ်အသုံးပြုသူ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအများအပြားသည် မဲပေးခြင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မိမိဒေသတွင် မဲစာရင်းစစ်ရန် လိုအပ်ခြင်းကို သိရှိလာကြသည်။
ကြိုတင်မဲပေးရာတွင် ပါဝင်နိုင်ရန် ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာပြည်သူများသည် ဘန်ကောက်ရှိ သံရုံး သို့မဟုတ် ချင်းမိုင်ရှိ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးသို့ အွန်လိုင်းမှဖြစ်စေ၊ စာတိုက်မှဖြစ်စေ၊ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ သွားရောက်ပြီး မှတ်ပုံတင်နိုင်ခဲ့သည်။
မှတ်ပုံတင်မှုများအားလုံးကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC) က စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီးသောအခါ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကြိုတင်မဲပေးရန် မှတ်ပုံတင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသား အရေအတွက်အပေါ် မူတည်ပြီး ကြိုတင်မဲပေးရက်များနှင့် နေရာများကို ကြေညာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘန်ကောက်ရှိ မြန်မာသံရုံးက ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် ကြိုတင်မဲပေးနိုင်ရေး မှတ်ပုံတင်ရန် တိုက်တွန်းပြီး မဲပေးခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ တာဝန်နှင့် အခွင့်အရေးဖြစ်ကြောင်း သတိပေးသည်။ ကြိုတင်မဲပေးရန် တောင်းဆိုမှုကို မှန်ကန်စွာ လက်ခံရရှိကြောင်းနှင့် ထပ်မံ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက် ရမည်များရှိသည့် စာရင်းကိုလည်း သံရုံးက ထုတ်ပြန်ပြီး မှားယွင်းသောလျှောက်လွှာကို အချိန်မီ ပြန်လည်တင်သွင်းစေခဲ့သည်။
ပထမဆုံးအကြိမ် မဲပေးမည့်သူများ စိတ်လှုပ်ရှားနေ
ဘန်ကောက်နှင့် အနီးတဝိုက် စမွတ်ပရာကန်၊ စမွတ်စခွန်တို့တွင် ၁၀ နှစ်ကျော် အလုပ်လုပ်နေသော အချို့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများသည် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးမည့်သူများ ဖြစ်သည်။
၂၀၁၅ တွင် ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကြိုတင်မသိရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့ မဲပေးခွင့်မရခဲ့ပေ။
အသက်အရွယ်အားဖြင့် ၂၀ မှ ၅၀ နှစ်အတွင်းရှိ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများထဲ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်း ၁၀ နှစ်မှ ၃၀ အထိ နေထိုင် အလုပ်လုပ်နေသူများ ပါဝင်ပြီး သူတို့အားလုံး ယခုရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင် ဆန္ဒပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အများစုမှာ စက်ရုံလုပ်သားများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့နားရက်သည်လည်း တနင်္ဂနွေနေ့ ဖြစ်သောကြောင့် လျှောက်လွှာများကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်တင်ရန် ခက်ခဲကြသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့် အလုပ်သမားအခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကျေးဇူးကြောင့် ကြိုတင်မဲပေးရန် ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံသော ပုံစံများကို စေတနာ့ဝန်ထမ်းများထံမှ ရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအလုပ်အကိုင်ဌာန၏ အဆိုအရ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်သြဂုတ်လအထိ မှတ်ပုံတင်ထားသော မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ၁.၁၅ သန်းရှိသည်။ စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားမဲ့ လုပ်သား မည်မျှရှိကြောင်းကို မသိရပေ။ ကူးစက်မြန် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်ပိုး (COVID-19) ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေမှုကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ထိခိုက်ရပြီး ပိတ်သိမ်းမှုများရှိသဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား တသိန်း (၁၀၀၀၀၀) ကျော် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်သွားကြသည်။ အစောပိုင်းအုပ်စုသည် မတ်လတွင်ပြန်ကြခြင်းဖြစ်ပြီး မေလ ၂၃ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ဆက်တိုက်ပြန်နေကြဆဲ ဖြစ်သည်။
“ဒီမဲပေးဖို့ အခွင့်အရေးကို ကျနော်တို့က ၅ နှစ် တကြိမ်ရတယ်။ ဒါက ကျနော့်အတွက် ပထမဆုံး မဲပေးရမယ့် အကြိမ်ဖြစ်လို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်”
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ မြန်မာ၊ လာအိုနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံများမှ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား စုစုပေါင်း ၂.၇၉ သန်း ရှိခဲ့သည်။ (COVID-19) ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မြန် ကပ်ရောဂါကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ရသူ လူ သုံးသိန်းကျော် (၃၁၀၀၀၀ ကျော်) သည် ၎င်းတို့ နိုင်ငံအသီးသီးသို့ မတ်လမှ စတင်ကာ ပြန်သွားသဖြင့် ယခုနှစ် ဇွန်လအထိ ဆိုပါက ထိုင်းနိုင်ငံစီးပွားရေးကဏ္ဍ အမျိုးမျိုးတွင် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ၂.၅၈၉ သန်း ကျန်နေသေးကြောင်း ထိုင်းအလုပ်အကိုင်ဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
“ဒီမဲပေးဖို့ အခွင့်အရေးကို ကျနော်တို့က ၅ နှစ် တကြိမ်ရတယ်။ ဒါက ကျနော့်အတွက် ပထမဆုံး မဲပေးရမယ့် အကြိမ်ဖြစ်လို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်”ဟု အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် ကိုဝင်းကိုဦးက ပြောသည်။
သူသည် အခြားသူများ၏ ကြိုတင်မဲ လျှောက်လွှာတင်နိုင်ရေး စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ကူညီကာ သြဂုတ်လ ၄ ရက်တွင် စမွတ်စခွန် ပြည်နယ် မဟာချိုင်ရှိ ၎င်း၏အလုပ်မှ ခွင့်ယူခဲ့သည်။
မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အများအပြား နေထိုင် မဟာချိုင်တွင် တနင်္ဂနွေ အားလပ်ရက်၌ အလုပ်နားကြရပြီး ဈေးဝယ်ထွက်လေ့ရှိသည်/ ငြိမ်းငြိမ်း
အလုပ်ပျက်မရသည့် သို့မဟုတ် ခွင့်မယူနိုင်သည့် အခြားသူများကို ကူညီရန် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကူညီပေးနေသူ ကိုဝင်းကိုဦးသည် သံရုံးသို့ လျှောက်လွှာ တဒါဇင်ကျော်ကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး လျှောက်လွှာများ တင်ပေးနေသည်မှာ သုံးကြိမ်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ပဲခူးတိုင်း တောင်ငူမှ ဖြစ်သော ကိုဝင်းကိုဦးက ပြောသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မှတ်ပုံတင်မရှိသောကြောင့် ကိုဝင်းကိုဦး မဲမပေးနိုင်ခဲ့ပေ။ သံရုံးက နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (CI) ထုတ်ပေးပြီးသောအခါတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ပြီး မှတ်ပုံတင်နှင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြုလုပ်ကာ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း ပြန်လည် လာရောက်အလုပ်လုပ်နေသူ ဖြစ်သည်။
စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ အကူအညီမယူဘဲ သံရုံးသို့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကာ ကြိုတင်မဲဖောင် တင်ခဲ့သူအနည်းငယ်ကိုလည်း ဧရာဝတီ သတင်းဌာနက တွေ့ခဲ့သည်။
အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ် ကရင်တိုင်းရင်းသား ကိုအောင်နိုင်ဝင်းသည် ပုံစံ ၁၅ (နိုင်ငံပြင်ပရောက်နေသူများ ကြိုတင်မဲပေးခွင့် လျှောက်လွှာ) တင်ရန်အတွက် သြဂုတ်လ ၄ ရက် (အင်္ဂါနေ့) က စမွတ်ပရာကန်ရှိ သူ၏ အလုပ်မှ ခွင့်တရက် ယူခဲ့သည်။
မွန်ပြည်နယ် သံဖြူဇရပ်ဇာတိဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်နေသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ နီးပါးရှိပြီဖြစ်သည့် ကိုအောင်နိုင်ဝင်းသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် တကြိမ်မျှ မဲပေးဖူးခြင်း မရှိပေ။ ကြိုတင်မဲ လျှောက်လွှာတင်အပြီး သံရုံးမှ ပြန်ထွက်လာချိန်တွင် ယခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ ပါဝင်မဲပေးခွင့်ရရန် သူမျှော်လင့်နေကြောင်း ဧရာဝတီ သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ကိုအောင်နိုင်ဝင်းက ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးချယ်ခံရရန်နှင့် ပြည်သူ ကောင်းကျိုး ဆောင်ရွက်ပေးမည့် အစိုးရကို ရွေးချယ်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ဆိုသည်။
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအများစု၏ သဘောထားဖြစ်သည့် ၎င်းတို့ ဘဝ၊ ၎င်းတို့မျိုးဆက်များ၏ ဘဝကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်သော ခေါင်းဆောင်များကို ရွေးချယ်လိုသည့် အမြင်မျိုးကိုလည်း သူ့တွင် တွေ့ရသည်။
မဟာချိုင်ရှိ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအခွင့်အရေးကွန်ရက် ဝန်ထမ်းများနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများက ကြိုတင်မဲလျှောက်လွှာဖောင်များကို ပြန်လည်စိစစ်နေစဉ်/ ငြိမ်းငြိမ်း
သြဂုတ်လ ၃ ရက်အထိ လျှောက်လွှာပေါင်း တသောင်းကျော်ကို လက်ခံရရှိထားကြောင်း မြန်မာသံရုံး၏ အဆိုအရ သိရသည်။ မည်သူ၏လျှောက်လွှာများကို ရရှိထားပြီး အချက်အလက် ထပ်မံဖြည့်စွက်ရန် လိုသည့် လျှောက်လွှာများကို သံရုံးက ၎င်းတို့၏ ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာတွင် ဇူလိုင်လနှောင်းပိုင်းက စတင်ဖေါ်ပြထားသည်။
ဘန်ကောက်မြို့တောင်ပိုင်း ဘန်ခဲမှ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတဦးဖြစ်သူ မညိုညိုဝင်းသည်လည်း ပထမဆုံးအကြိမ် မဲပေးမည့်သူတဦးဖြစ်သည်။
သြဂုတ်လ ၂ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ဘန်ကောက်ရှိသံရုံးသို့ ကြိုတင်မဲလျှောက်လွှာများ ကူညီပေးပို့ပေးနေသော မဟာချိုင်အခြေစိုက် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအခွင့်အရေး ကွန်ရက်မှ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများထံ သူမ သွားရောက်ကာ လျှောက်လွှာတင်နိုင်ရေး အချက်အလက်ဖြည့်ခဲ့သည်။
ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ရန် အချို့က ၎င်းတို့၏ တနေ့တည်းသော အားလပ်ရက်ဖြစ်သည့် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် စိတ်အားထက်သန်စွာ ပါဝင်ကြသော်လည်း အချို့သော ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်များမှ လူများက ၎င်းတို့သည် ရွေးကောက်ပွဲကို စိတ်မဝင်စားကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။
“နိုင်ငံရေးသမားတွေက မဲလိုချင်ရင် ရောက်လာပေမယ့် ပြီးရင် ကျနော်တို့ကို ဂရုစိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေ ဘာတိုးတက်မှုမှ မရှိဘူး”
ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး မည်သည်ကိုမျှ မသိကြောင်းနှင့် မဲပေးရန် စိတ်မဝင်စားကြောင်း မွန်ပြည်နယ် သထုံမြို့နယ်မှ အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ် စိုင်းချစ်ကိုကိုက ပြောသည်။
ပအို့ဝ် တိုင်းရင်းသား စိုင်းချစ်ကိုကို ရွေးကောက်ပွဲတွင် စိတ်မဝင်စားရခြင်း အကြောင်းရင်းများအနက် တခုက“နိုင်ငံရေးသမားတွေက မဲလိုချင်ရင် ရောက်လာပေမယ့် ပြီးရင် ကျနော်တို့ကို ဂရုစိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေ ဘာတိုးတက်မှုမှ မရှိဘူး”ဟု ခံစားရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၁၀ နှစ်ကျော် နေထိုင်အလုပ်လုပ်နေသည့် စိုင်းချစ်ကိုကိုသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ၃ လခန့် အလုပ်ပြုတ်ခဲ့ရသေးသည်။ ထိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချို့ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်သောအခါ အလုပ်သစ်ရခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မရှိသောကြောင့် အခြားသူများကဲ့သို့ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဆက်လက်နေထိုင်မည်ဟုလည်း သူက ဆိုသည်။
မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်မရော မြို့နယ်မှ ကရင်တ်ိုင်းရင်းသား ကိုကျော်ဦးက “ကျနော်က မဲပေးချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်နိုင်ငံရေး နားမလည်တော့ ခက်ခဲတယ်” ဟု ဆိုသည်။ အတန်းပညာကျောင်းမနေခဲ့ဖူးသလို နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ သူ့အတွက် အလှမ်းဝေးပြီး မိသားစု ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ရေးသည်သာ သူ့အတွက် ဦးစားပေးဖြစ်ကြောင်း ကိုကျော်ဦးက ဆိုသည်။
“ကျနော်က နိုင်ငံကို ကောင်းစေချင်တယ်။ အစိုးရက လျှပ်စစ်မီးပေးတာတို့ တခြားနိုင်ငံတွေလို လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းအောင်လုပ်တာတို့လို ကောင်းတာတွေလုပ်ရင် ကောင်းပါတယ်” ဟု သူ့အမြင်ကို ပြောဆိုသည်။
စမွတ်စခွန်ပြည်နယ်အစွန်ရှိ မဟာချိုင်မှ သူ၏ နေအိမ်တန်းလျားသို့ ရောက်ခဲ့စဉ် အချို့သောသူများသည် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် မဲပေးရန် စိတ်ဝင်စားသော်လည်း အချိန်နှင့် ဗဟုသုတ အကန့်အသတ်ရှိသောကြောင့် ကြိုတင်မဲလျှောက်လွှာ မည်သို့တင်ရမည်ကို မသိရှိကြကြောင်း ဧရာဝတီက ကြားသိရသည်။ ဖေ့ဘွတ်မှ သတင်းအချက်အလက်များကို ၎င်းတို့ သိရသော်လည်း လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရန် နည်းပညာ ဗဟုသုတမရှိ၊ ထိုလျှောက်လွှာများကို ပရင့်ထုတ် ကူးယူနိုင်မှုမရှိသလို အများအပြားမှာ ထိုပုံစံများကို မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ပြီး သံရုံးသို့ပို့ရမည့် ဗဟုသုတမရှိ ဖြစ်နေသည်။
“ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေက သတင်းအချက်အလက် သိပ်မရကြဘူး။ သူတို့ရဲ့ အချိန်အများစုကို အလုပ်မှာနဲ့ အိမ်မှာပဲ ကုန်ကြရတာ များတယ်။ ကျမတို့ကလည်း ကျမတို့မှာရှိတဲ့ ဗဟုသုတ နည်းနည်းလေးနဲ့ဘဲ စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်နေကြတာ။ မဲဆွယ်ကာလမှ သတင်းအချက်အလက်တွေ ပိုမို မျှဝေပေးရင် ပိုကောင်းတယ်”
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများအကြားတွင် ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး စိတ်အားထက်သန်မှု ရှိသော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို သိရှိမှု အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ရှိနေသည်။ သို့သော် အနည်းငယ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ အကြောင်း ကောင်းစွာသိပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် တက်ကြွစွာ လုပ်ဆောင်နေကြသည်။
ကြိုတင်မဲပေးရန် လျှောက်လွှာတင်ပြီးသူအချို့က ထိုသို့ မဲပေးခွင့်မှတ်ပုံတင်သည်ကို ဆန္ဒမဲပေးပြီးသည်ဟု မှားယွင်းယူဆနေခြင်းများလည်း ရှိသည်။
“ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေက သတင်းအချက်အလက် သိပ်မရကြဘူး။ သူတို့ရဲ့ အချိန်အများစုကို အလုပ်မှာနဲ့ အိမ်မှာပဲ ကုန်ကြရတာ များတယ်။ ကျမတို့ကလည်း ကျမတို့မှာရှိတဲ့ ဗဟုသုတ နည်းနည်းလေးနဲ့ဘဲ စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်နေကြတာ။ မဲဆွယ်ကာလမှ သတင်းအချက်အလက်တွေ ပိုမို မျှဝေပေးရင် ပိုကောင်းတယ်”ဟု မယမင်းက ပြောသည်။
ဘန်ကောက်တွင်သာမက မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် ချင်းမိုင်၊ ရနောင်း၊ မဲဆောက်နှင့် စမွတ်စခွန် အပါအဝင် နေရာအတော်များများတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ကြိုတင်မဲပေးခွင့်ရရေးအတွက် အဓိကအခန်းမှ ပါဝင်နေကြသည်။
မဟာချိုင်ရှိ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအခွင့်အရေးကွန်ရက် ဝန်ထမ်းများနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများက ကြိုတင်မဲပေးလိုသူ မြန်မာအလုပ်သမားများကို ကူညီပေးသည်/ငြိမ်းငြိမ်း
မဟာချိုင်တွင် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ခန့်မှန်းခြေ လေးသိန်း (၄၀၀၀၀၀) ခန့် စက်ရုံ အလုပ်ရုံများတွင် လုပ်ကိုင်နေပြီး အများအပြားမှာ ပင်လယ်စာ ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် အလုပ်လုပ်ကြသည်။ သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကြိုတင်မဲပေးရန် စိတ်ဝင်စားသူ အရေအတွက်မှာ လူဦးရေနှင့်ယှဉ်လျှင် နည်းပါးကြောင်း ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအခွင့်အရေး ကွန်ရက် ဥက္ကဌ ဦးအောင်ကျော်က ဆိုသည်။
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအခွင့်အရေးကွန်ရက် ဝန်ထမ်းများနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည် ကြိုတင်မဲလျှောက်လွှာဖောင်များကို ဖြန့်ချိပြီး မဲပေးရန် စိတ်ဝင်စားသောသူများအနေဖြင့် လျှောက်လွှာပုံစံကို မှန်ကန်စွာဖြည့်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်စား ထိုလျှောက်လွှာများကို တင်ရန်ကူညီခဲ့သည်မှာ ကြိုတင်မဲ လျှောက်လွှာတင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလ တလျှောက်လုံးတွင် ဖြစ်သည်။
မဟာချိုင်တွင် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများစွာရှိကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့မဲပေးခွင့်ရရန် လျှောက်လွှာ တထောင်ကျော်ကို သူ၏အဖွဲ့က တင်ပေးထားကြောင်း ဦးအောင်ကျော်က ဆိုသည်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း ပထမဆုံး မဲပေးရမည့်သူ ဖြစ်သည်။
လာမည့်ကြိုတင်မဲပေးကာလတွင် ကြိုတင်မဲရုံသည် ဘန်ကောက်သံရုံး တနေရာတည်း မဟုတ်ဘဲ မဟာချိုင်ရှိ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ အလွယ်တကူ မဲပေးနိုင်ရန် မဟာချိုင်တွင် ကြိုတင်မဲပေးရုံဖွင့်ပေးလျှင် ကောင်းမည် ဟု သူက ယူဆသည်။
သို့သော် သံရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထိုကိစ္စကို မည်သို့ ဆုံးဖြတ်မည်ကို မသိရသေးပေ။ လျှောက်လွှာများ အတည်ပြုပြီးပါက ကြိုတင်မဲပေးခွင့်ရ မဲဆန္ဒရှင်များသည် သံရုံး သို့မဟုတ် ချင်းမိုင်ရှိ ကောင်စစ်ဝန်ရုံးတွင်သာ မဲပေးရမည် (သို့မဟုတ်) သံရုံးအနေဖြင့် ရွေ့လျားမဲရုံများကို ကြိုတင်မဲပေးခွင့်စာရင်းဝင်သော ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားမဲပေးသူ များပြားသောနေရာများတွင် စီစဉ်ပေးမည် မပေးမည်ကို မသိရသေးပေ။
Nyein Nyein ၏ Volunteers Help Myanmar Migrant Workers Register to Vote in Thailand ကို ဘာသာပြန်ဆိုပြီး အချက်အလက်အချို့ ဖြည့်စွက်ထားပါသည်။
]]> မြန်မာအကျဉ်းသား ၈၄ ဦးကို ထိုင်းကပြန်ပို့ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/07/229429.html Mon, 07 Sep 2020 11:14:19 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=229429
အချုပ်ခံနေရသူ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ၃၀၀ ခန့် အနက် ၈၄ ဦးကို ယနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံဘက်ခြမ်း ကော့သောင်းသို့ လွှဲပေးလိုက်သည်။
The post မြန်မာအကျဉ်းသား ၈၄ ဦးကို ထိုင်းကပြန်ပို့ appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကြောင့် ရခိုင်မှာ ဒုက္ခသည်များ စားနပ်ရိက္ခာ ပိုခက်မည်ကို စိုးရိမ်ရ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/02/229132.html Wed, 02 Sep 2020 06:41:31 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=229132
ရခိုင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာစိုင်းဝင်းဇော်လှိုင်က ဒုက္ခသည်စခန်းများ၌ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူ မရှိသေးကြောင်း ပြောသည်။
The post ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကြောင့် ရခိုင်မှာ ဒုက္ခသည်များ စားနပ်ရိက္ခာ ပိုခက်မည်ကို စိုးရိမ်ရ appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> နာဂ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် ၃ ဦး တာဝန်မှ ထုတ်ပယ်ခံရ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/07/30/227210.html Thu, 30 Jul 2020 13:08:13 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=227210
ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင် ၃ ဦးသည် ကောင်စီကို မထီမဲ့မြင်ပြုကာ အဖွဲ့မှ ခွဲထွက်သည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည့်အတွက် ၎င်းတို့ ၃ ဦးကို အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်ဟု ထုတ်ပြန်ပြောဆိုသည်။
The post နာဂ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် ၃ ဦး တာဝန်မှ ထုတ်ပယ်ခံရ appeared first on ဧရာဝတီ.
မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အခြေစိုက် နာဂအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီ (ကပ်ပလန်-NSCN-K) အဖွဲ့က ၎င်း၏ ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင် ၃ ဦးသည် ကောင်စီကို မထီမဲ့မြင်ပြုကာ အဖွဲ့မှ ခွဲထွက်သည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည့်အတွက် ၎င်းတို့ ၃ ဦးကို အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်ဟု ထုတ်ပြန်ပြောဆိုသည်။
NSCN-K အဖွဲ့၏ ဇူလိုင် ၂၉ ရက် ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ၎င်းတို့ နာဂ စစ်တပ်၏ ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး နီဂေဆူမီ၊ စစ်ဦးစီးအရာရှိ ပထမတန်း ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ညမ်လန် နှင့် နာဂဝန်ကြီး စတားဆန် တို့ အား ထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။
၎င်းတို့ ၃ ဦးသည် ပါတီခွင့်ပြုချက်မရဘဲ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း၊ ကောင်စီ ခေါင်းဆောင်များ၏ ဆက်သွယ်မှုအား အကြိမ်ကြိမ် ငြင်းပယ်ခြင်း၊ ပါတီရံပုံငွေများအား အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပါတီအတွင်း သွေးကွဲစေသော မူဝါဒနှင့် အယူဝါဒများ ဖြန့်ခြင်း စသည့်တို့ကြောင့် ထုတ်ပယ်ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု NSCN ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူး ဂျူလိုင်ထောင်းက ထုတ်ပြန်ချက်အား ရှင်းပြသည်။
ဗိုလ်မှူး ဂျူလိုင်ထောင်း က “သူတို့ကျတော့ ချွန်ထွက်ပီးမှပေါ့ အခုလိုမျိုး နိုင်ငံရေးပိုင်းမှာ သော်လည်းကောင်း သွေးကွဲမှုတွေ လုပ်ဆောင်မှုတွေ လုပ်လာတဲ့အတွက် ထုတ်ပယ်ရခြင်း ဖြစ်တယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
NSCN-K သတင်းပြန်ကြားရေးဌာန ထုတ်ပြန်ချက်ထဲတွင်လည်း “ဖော်ပြပါ အကြောင်းအချက်များကြောင့် ပါတီကယ်တင်ရန် နှင့် အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှု ယခုထက် ပိုမဆိုးစေရန် ၎င်းတို့အား ယနေ့ (ဇူလိုင် ၂၉) တွင် ထုတ်ပယ်ရခြင်း ဖြစ်သည်” ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ထုတ်ပယ်ထားခြင်းခံရသူ ၃ ဦးနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူ ပါတီဝင် မည်သူကိုမဆို အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ အပြီးတိုင် ရုတ်သိမ်းသွားမည် ဟုလည်း ဖော်ပြထားသည်။
NSCN-K အဖွဲ့၏ ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါအဝင် ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် ၃ ဦးအား ထုတ်ပယ်လိုက်ခြင်းသည် ထို ၃ ဦးက လက်ရှိ NSCN-K ဥက္ကဋ္ဌ အား ဖယ်ထုတ်ပီး အဖွဲ့သစ် ထောင်လိုက်ပီဟု အင်္ဂါနေ့က ထုတ်ပြန်ပြောခဲ့ပြီး နောက်တရက်တွင် ဖြစ်သည်။
လွတ်လပ်သော နာဂနိုင်ငံ တည်ထောင်ရေး ကြိုးပမ်းနေသည့် NSCN သည် နာဂလန်းပြည်သူ့အစိုးရ (NSCN/GPRN) ဟု ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ပြီး ၎င်းတို့ကို မြန်မာပြည်သူများက NSCN-K အဖြစ်သာ သိရှိကြသည်။ ယခု လက်ရှိ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဦးယုန်းအောင်က ဦးဆောင်ပြီး ၎င်းသည် NSCN-K တည်ထောင်သူ အက်စ်အက်စ် ကပ်ပလန် ၏ တူတော်စပ်သည်။
နာဂ စစ်တပ် မှ နီဂေဆူမီသည် အိန္ဒိယအစိုးရ အမျိုးသားစုံစမ်းရေးအေဂျင်စီ အလိုအရှိဆုံး ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားခြင်း ခံရသူဖြစ်ပြီး ၎င်းမည်သည့်နေရာတွင် ရှိသူကို ဖော်ထုတ်နိုင်သူကို ရူပီးငွေ တသန်း ဆုကြေးငွေ ထုတ်ထားခြင်း ခံရသူ ဖြစ်သည်။
NSCN/GPRN ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူး ဂျူလိုင်ထောင်းက “ကျနော်တို့ အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားပြုအနေနဲ့ ဒီငွေကြေးတွေ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ရံပုံငွေတွေကို သူတို့ကို ကောက်ခံခိုင်းထားတာ ရှိတယ်။ ဒီ အိန္ဒိယ ဘက်ခြမ်းမှာ။ အဲဒီငွေတွေလည်း ဗဟိုကို လုံးဝ မသွင်းဘူး။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံလိုပဲ အသုံးပြုတယ်။ ရံပုံငွေက ရူပီးပေ့ါနော် အိန္ဒိယငွေ သိန်းရာနဲ့ချီတယ် အနည်းဆုံး သိန်း ၂၀၀-၃၀၀ လောက်တော့ ရှိမှာပေါ့” ဟု ဧရာဝတီသတင်းဌာနသို့ ပြောဆိုသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းရှိ အစိုးရအသိအမှတ်ပြု နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသတွင် အခြေစိုက်ထားသော NSCN-K ဗဟိုဌာနချုပ် တကားသို့ တပ်မတော်က ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လ တွင် ဝင်သိမ်းခဲ့ပြီးကတည်းက NSCN-K အဖွဲ့ဝင်များ နယ်စပ်ဒေသသို့ ရွှေ့ပြောင်းသွားကြရသည်။
NSCN-K သည် အိန္ဒိယအစိုးရကို တော်လှန်နေသော ကသည်း နှင့် အာသံ သူပုန်များကို လက်ခံပြီး စစ်သင်တန်းပေးခြင်းများ ပြုလုပ်သည်ဟု ဆိုကာ တပ်မတော်က လုံခြုံရေးအရ ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ကသည်းနှင့် အာသံ သူပုန်များကို လက်ခံ ကူညီသည့်အတွက် စစ်ကိုင်းတိုင်းအစိုးရနှင့် NSCN-K တို့အကြား ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ချုပ်ဆိုထားသော ပဏာမ အပစ်ခတ်ရပ်ဆဲရေး စာချုပ်ကို ချိုးဖောက်သည်ဟု တပ်မတော်ဘက်က စွပ်စွဲကာ NSCN-K အဖွဲ့ဝင်များကိုလည်း ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားတခုတွင် တွေ့ရသည့် Naga Army
NSCN-K ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦး ဖမ်းဆီးခံရပြီး၊ တရားစွဲခံရကာ နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။
သို့သော် ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်များကို ၎င်းတို့သည် ပါတီ၏ နိုင်ငံရေးမူများနှင့် ဆန့်ကျင်ကာ တနိုင်ငံလုံး အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) ရေးထိုးရန် လှုံ့ဆော်မှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု ဆိုကာ ယမန်နှစ် နိုဝင်ဘာလက NSCN-K က ထုတ်ပယ်ခဲ့သေးသည်။ NSCN-K က NCA လက်မှတ်မထိုးလိုဘဲ မြန်မာနှင့် အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံကြားရှိ နာဂလူမျိုးများ စုစည်းကာ လွတ်လပ်သောနာဂနိုင်ငံ ထူထောင်မည်ဟု ပြောဆိုထားသည်။
တကားဒေသသို့ NSCN-K အဖွဲ့ဝင်များ ပြန်လည် နေထိုင်ခွင့်မရသေးဘဲ တပ်မတော်က ထိန်းချုပ်ထားဆဲ ဖြစ်သည်ဟု ဗိုလ်မှူး ဂျူလိုင်ထောင်းက ဆိုသည်။
NSCN-K အဖွဲ့သည် ၎င်း၏ ခေါင်းဆောင် အက်စ်အက်စ် ကပ်ပလန် ကွယ်လွန်ပြီးသည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လ နောက်ပိုင်း နှစ်စဉ်လိုလို အကွဲအပြဲများ ဖြစ်ပေါ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ယခင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း အိန္ဒိယနာဂ (ခေါ် )အနောက်နာဂ သား ကန်ဂို ကွန်းညက် (Khango Konyak) ကို ဖြုတ်ချပြီး ဦးယုန်းအောင် က ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာသည်။
ဗိုလ်မှူး ဂျူလိုင်ထောင်း က “ပါတီကတော့ အရှေ့နာဂ၊ အနောက်နာဂလို့ ခွဲခြားဆက်ဆံတာမရှိဘူး။ အရှေ့အနောက် တောင်မြောက်မှာ ကျနော်တို့ လွတ်လပ်ရေးပန်းတိုင်ရောက်အောင် ကြိုးပမ်းနေတဲ့ အဖွဲ့တွေပဲပေါ့။ နာဂအားလုံးလည်း ကျနော်တို့နဲ့ အတူတကွရှိတယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။
NSCN-K သည် သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်က စတင်သည့် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုများတွင် ပါဝင်လာပြီးနောက်ပိုင်း NSCN-K အဖွဲ့နာမည်ကို မြန်မာအများစုက ကြားဖူးကြသော်လည်း ၎င်း၏ ခေါင်းဆောင်အများစုကို မသိကြပေ။ ယခု ထုတ်ပယ်ခံရသူ ၃ ဦးသည်လည်း မြန်မာအစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးသည့် အဖွဲ့တွင် မပါဝင်ပေ။
]]> ဒီမိုကရေစီ စစ်စစ်ကို သွားမယ်ဆိုရင် ပြည်သူ မဲပေးမှ ဖြစ်မယ် https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2020/07/30/227191.html Thu, 30 Jul 2020 09:10:17 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=227191
“ဘယ်လိုမျိုး အတားအဆီးကမှ ကျမရဲ့ နိုင်ငံရေး ခံယူချက်၊ ကျမရဲ့ နိုင်ငံရေးကြိုးပမ်းမှုကို ဖျောက်ဖျက်လို့ မရနိုင်ပါဘူး” ဟု သူမက ဧရာဝတီ သတင်းဌာနသို့ ပြောဆိုသည်။
The post ဒီမိုကရေစီ စစ်စစ်ကို သွားမယ်ဆိုရင် ပြည်သူ မဲပေးမှ ဖြစ်မယ် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ကရင်အမျိုးသမီး အသတ်ခံရမှု တရားမျှတမှုရရေး ဒေသခံများ ဆန္ဒထုတ်ဖော် https://burma.irrawaddy.com/news/2020/07/30/227173.html Thu, 30 Jul 2020 05:40:52 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=227173
ကျေးရွာပေါင်း ၁၁၄ ရွာမှ ဒေသခံ ရွာသူရွာသားပေါင်း ၄၆၅၀ ဦး တို့က ကြွေးကြော်သံများကို ကြွေးကြော်ရင်း ဖာပွန်နှင့် ကမမောင်း မြို့များသို့ ချီတက်ခဲ့ကြသည်။
The post ကရင်အမျိုးသမီး အသတ်ခံရမှု တရားမျှတမှုရရေး ဒေသခံများ ဆန္ဒထုတ်ဖော် appeared first on ဧရာဝတီ.